China Ebube Azụ Azụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ebube Azụ Azụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ebube Azụ Azụ)
ETL DLC duru akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 240W foto foto
ETL DLC duru akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 240W foto foto NKWU NDỊ ỌZỌ: Bbier na- edu okporo ámá akpụkpọ ụkwụ ìhè nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 700W HPS / MH nnọchi. MGBE OGE OGE: Bbier na- eduzi ìhè n'okporo ámá nke ọma n'okporo ámá dị mma maka afọ 50,000 nke ndụ. MGBE A GA-EME: Bbier...
IOT Na-achịkwa Ngwá Ọrụ Na-enwu Azụ
IOT Na-achịkwa Ngwá Ọrụ Na-enwu Azụ N'abalị, anyanwụ na-eduzi nkwụsị elu ga-agbanye na-achagharị ọkụ ma na-enwu ọkụ site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na-egbuke egbuke nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a mere ka ebe elu gafee na akpaghị aka mgbe anyanwụ dara ma gbanyụọ mgbe anyanwụ rutere. Ọ bụrụ na ogwe ndị ahụ...
150W Azụmahịa Ntanye nke Ụlọ Ọrụ Gas
150W Azụmahịa Ntanye nke Ụlọ Ọrụ Gas Ebube na-eduzi anyị Adiding 130W na- eji àgwà ihuenyo 3030 Dhip, nwere ike iguzogide ihe dị elu ma na-ekesa ìhè. Nke a Led Petrol Station Lighting na- eji ọkwọ ụgbọala dị elu, nke na-egosi CE ROHS abd afọ atọ. Ebe anyị na-anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enwu eji nkà na ụzụ ọhụụ ọhụrụ,...
30w na-enwete ọkụ na azụmaahịa
Bbier 30w Led Light Post Top Commercial Fixtures na -egbukepụ egbukepụ na ọkụ lumens dị irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a na-eme ka ndị ahịa na-emepụta ihe dị mma na-eme ka a mara ya maka 50000 awa nke ndụ. Nke a na-eme ka ìhè Post Post ahịa kachasị mma 30w kwesịrị ime 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na anụ...
50W Azụmahịa nke Ahịa nke Ahịa
Nke a Commercial Solar Light Post 50w bụ ezigbo ochie-kwesịrị ekwesị n'ihi na-arịọnụ n'elu otu dị 3 "dayameta gburugburu osisi. Anyị 50w Solar Light Nnọchi bụ kasị na kasị dị ike osisi n'elu ìhè anyị na-enye. Bụla Commercial Solar Ìhè 50w nwere mmepụta nke ihe dị ka 4000lm ma nwee ike ịmalite ìhè...
Ebube Azụ Azụ Ebube Azụ Ebube Ọrụ Ọrụ Ebube Azụ Mmiri Ukwu Ebube Ụlọ Nlekọta Azụ Akwa Azụ Na-enwu Azụ Ebube Ụlọ Ahịa Canada Egwuregwu ọkụ ọkụ